ညီလင်းသစ်: နှစ်စီးတွဲ ပဲ့ကိုင် ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 14.11.11
ဗဟုသုတရစေတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့စီတော့ဗျာ စမ်းသပ်ချင်တဲ့ရေတွေကို နေရာမတူဘဲ ရေပုံးလေးနဲ့သွားခပ်တာဘဲဗျို့ ပြီးတော့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြတာပေါ့ အဲလို နှစ်စီးတွဲ ဆိုတာကြီးလဲ အခုမှဘဲ မြင်ဘူးတော့တာဘဲ လှေကလေးလှော်ပြီး သွားခပ်ကြတာပ့ါ ...
အစ်ကို့အလုပ် ပြာလွင်နေတဲ့ ရေပြင်ကို မြင်တွေ့နေရတာကိုက စိတ်ချမ်းသာစရာ ။ ဗဟုသတလည်းရတယ် ကျေးဇူးဗျ။
ဓါတ်ပုံ ဓါတ်ပုံ ... ကြိုက်တယ်.. ပထမဆုံး ပုံနဲ့ တတိယပုံ ကြိုက်တယ်။ နောက်အဆင်ပြေမယ် အကို ဓါတ်ပုံရိုက်ရုံသက်သက် ရိုက်ထားတာတွေ တင်ပါဦး... :)
Hi Bro, nice Crop for third photo.
အခုတော့ catmine ဖြစ်သွားပါပြီ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ဘဲ... ဗဟုသုတလဲရတယ်... ဓာတ်ပုံလေးတွေကောင်းလိုက်တာ...
အစ်ကိုစက်လှေလေးကို ဒွိစက်လှေ လို့နာမည်ပေးလိုက်
ကြိုက်ရင် ညဏ်ပူဇော်ခ ပေးရမှာနော်.....:D
I have done similar work like you few years before in Middle East. Are you using SonTek acoustic doppler? Which model? ;)
ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ အရာလေးတစ်ခု ထမြောက်အောင်မြင်သွားရင် ၀မ်းသာပီတိစိတ်က အတိုင်းမသိဖြစ်တတ်ကြတာ လူ့သဘာဝပါ။ ရေကူးနေတာတွေတွေ့လို့ အပမ်းဖြေပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ စမ်းသပ်တာဆိုရင်တော့ ပျော်စရာကြီးနေမှာပါ။ ဒီအလုပ်တွေ လုပ်နေပြီဆိုမှတော့ ရေကူးကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုတာ ပြောစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်..။
အကိုရေ ဗဟုသုတ အတွက်ကျေးဇူးပါနော်
ပုံတွေထဲမှာတော့ အဖြူအမည်း ပုံလေး
ဒီလောက်တော့လည်း ကြောက်စရာ မကောင်းပါဘူးဗျာ၊ ဆန္ဒရှိရင် အသက်ကယ်အင်္ကျီလည်း ဝတ်ထားလို့ ရတယ်လေ..၊း)
ဒီမှာလည်း ဒီလိုပါပဲဗျာ၊ အပေါ်ယံ ရေမျက်နှာပြင် ဆိုရင်တော့ ရေပုံးနဲ့လည်း ခပ်ကြတာပါပဲ..၊
ဟုတ်ကဲ့..၊ အဆင်ပြေသလို တင်ပါ့မယ်..၊
အမည်ပြောင်းက အကျွေးအမွေးလေး ဘာလေး မပါဘဲနဲ့ ဖြစ်သွားတာလားဗျ..?း)
“ဒွိစက်လှေ” ...၊ ဟား.. သိပ်ကောင်းတဲ့ နာမည်ပဲဗျ၊ ကျေးဇူးဗျာ၊ အင်း.. ဥာဏ်ပူဇော်ခကိုတော့ ကျနော်တို့ ဆုံဖြစ်တဲ့အခါ အရည်အဖြစ်နဲ့ ပေးမယ်လေ၊ ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား..၊း)
Ah..nice to know that you had the same experience. :) We use Workhorse Sentinel model from Teledyne RD Instruments.
ညီမက စိတ်နဲ့ခရီးသွားနေပြီ ထင်တယ်...၊း)
ရေကူးကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အင်းယားကန်မှာ သွား,သွားပြီး ခိုးကူးထားလို့ အတော်အတန် ကူးတတ် ပါတယ်..၊း)
အဖြူအမည်းပုံ ဆိုလို့ ဘယ်ဟာများပါလိမ့် ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ခေါက် ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်..၊း) ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ညီမရေ..။
အစ်ကို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကို ဒီနေ့မှ ဖတ်ဖူးတာပါ။ အရမ်းပဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အကုန်လုံးတော့ မဖတ်နိုင်သေးပေမဲ့ ဖတ်ရသလောက် စာဖတ်သူကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တယ်။ ညီမက Grimisuatကပါ။ ညီမတို့လက်ထပ်တော့ Sionမှာပါ။ အမျိုးသားအလုပ်ရှိတဲ့ဒေသနိုင်ငံတွေမှာ လက်ရှိကျင်လည်နေရဦးမှာမို့ အခြေချပြီး မနေသေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ၂ယောက်လုံးက မြန်မာမှာပဲ အခြေချချင်ကြတယ်။ ဆောင်းပါးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ အစ်ကို။
ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတော့ အတော်ကိုကြိုက်တယ်။ တကယ့်ကို ပရိုပါပဲရှင်။
နောက်ဆုံးဓါတ်ပုံလေးတော့ အခိုက်ဆုံးပဲ။ ရာသီဥတုက ကိုယ့်ဘက်ပါနေချိန်လေး ဆိုပါတော့း)
ရေပြင်လွှာပြာလဲ့လဲ့က လှသလို ဓာတ်ပုံကလည်း တကယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်ရာဆိုတော့ ကောင်းမှကောင်း...
ဆောင်းဦးရဲ့ ရဲရင့်နီစွေး. ရွှေဝါရောင်ပြေးနေတဲ့ သစ်ရွက်လေးတွေကိုလည်း သိပ်သဘောကျသရှင်..
ဟုတ်တယ်. ကိုညီလင်း ကင်မရာနဲ့ အဲသလို သဘာဝအလှတွေ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးပါဦး..
အဲဒီဘက်က ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အလှလေးတွေ မြင်ချင်ပါသေးတယ်..
စကားမစပ်။ ။ ကျွန်မကတော့ နှစ်မွှာအသည်းလှေလို့ ပေးသွားတယ်ရှင့် :P
အစ်ကိုတို့ ပရောဂျက်ကစိတ်ဝင်စားစရာဘဲ..။ အစပိုင်းစိတ်ရှုပ်ရပေမယ့် ပြီးခါနီးလေပျော်ဖို့ကောင်းလေးဘဲမလား..။ ကျွန်တော်တော့ ရေကြောက်တယ်..မကူးတတ်လို့..။ ဒီနှစ်ဘယ်ခရီးသွားအုန်းမလဲ...တစ်နှစ်ကလည်းခဏလေးရယ်နော်..။
ဓာတ်ပုံတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပရိုအဆင့်..ကိုညီ့အလုပ်က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်..ဗဟုသုတ တိုးတယ်ဗျား
အစ်ကိုရေ... ရှုခင်းတွေ တော်တော်လေး လှတယ်နော်...
ဓာတ်ပုံ ရိုက်ချက်တွေ ကောင်းတာလဲ ပါမယ်ထင်တယ်...
အဲဒီလို ရေထဲမှာ သွားလာနေရတာကို သဘောကျတယ်..
အရင်ကဆိုရင် စက်လှေတစ်စင်းနဲ့ မြစ်ထဲမှာ သွားလာနေတာပေါ့...
စမ်သပ်မှုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အစ်ကို...
မောင်ညီလင်းရေ တစ်ခါတစ်ရံ အခုလိုရေပြင်ကျယ်ကြီးတွေကို ကြည့်ရတာ ကြည်နူးစရာ။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်ရက်ဆက်မြင်နေရရင် ညည်းငွေ့လာမယ်ထင်တယ်။
ဒါဆို ကျနော်နဲ့ သိပ်မဝေးဘူးပဲ၊ Grimisuat နားက Savièse မှာတော့ တစ်ပတ်လောက် လာနေဖူးတယ်ဗျ၊ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါပဲနော်၊ နောက်လည်း အဆင်ပြေသလို ဝင်ထွက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ..၊
ရာသီဥတုကတော့ ကိုယ်နဲ့ အလိုတူ အလိုပါလေ..၊း)
“နှစ်မြွှာအသည်းလှေ”...၊ ဟား..တယ်မိုက်ပါလား၊း) အဲဒီအပေါ်မှာ စမ်းသပ်မှုတွေ မလုပ်တော့ဘဲ သူမနှင့် အတူ ရွက်လွှင့်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာပြီ...၊း)
ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းအတွက် လောလောဆယ်တော့ ဘာခရီးမှ မစီစဉ်ထားဘူးဗျ၊ တောင်ပေါ်လည်း သွားဖြစ်ရင် အလွန်ဆုံး တစ်ရက်လောက်ပါပဲ..၊
မြစ်ထဲမှာ စက်လှေနဲ့ သွားရတာ မိုက်တာပေါ့ဗျ၊ မြစ်တွေရဲ့ ရှင်သန်လှုပ်ရှားမှုက အမြဲပဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်လေ..။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တခါတလေတော့လည်း အထူးအထွေကို မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး၊ မြင်ပါများတော့ယဉ် ဆိုတာ အမှန်ပါပဲဗျာ..။
ကိုညီလင်းသစ်ရေ မရောက်တာကြာလို့ ဖတ်စရာပို့စ်တွေ အတော်ပုံနေပြီ။ ကိုညီလင်းသစ်အလုပ်က အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ထိတွေ့ပြီးလုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေကို တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကလဲ လှလိုက်တာ။ နောက်ဆုံးပုံလေးဆို အကြီးကြီး Print out ထုတ်ပြီး အိမ်မှာပိုစတာ လုပ်ပြီးကပ်လို့တောင်ရမယ်ထင်တယ်။
ခရီးသွားပို့စ်တွေအတွက် နောက်တခေါက် အေးအေးဆေးဆေးပြန်လာဖတ်ပါအုံးမယ်။ သမီးကိုလဲ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ရုပ်တွေပြချင်လို့။
Mannual လောက် စိတ်ချရတာ သိပ်မရှိလှပါဘူး (ကျနော့အမြင်) Man error မဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့လေ။
စစ်တွေမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ အမေ ပြောဖူး တာတော့သူတို့ငယ်ငယ်က လှေ၂ စီးတွဲတွေကို ပိုက် (ဒလူးကဲ့သို့ ) တွေနဲ့ ဂျော့ပုစွန် (ငပိလုပ်တဲ့) ပုစွန်တွေ ဖမ်းကြတယ်လို့ပြောဖူးပါတယ်။ ခေါ်တဲ့ အတေခါ် အဝေါ်တော့ မေ့သွားပါပြီ။ အဲ့လို လှေမျိုးပဲ ထင်ပါတယ်။ စက်ပါတာနဲ့မပါတာပဲ ကွာမယ်ထင်ပါတယ်။
စလုံလူမျိုးတွေ စီးတဲ့လှေမျိုးလည်း ကြားဖူး မြင်ဖူးပါတယ်။ ဘာနာမည်လည်းတော့ မသိခဲ့ပါဘူး။
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ် ကိုညီ
စမ်းသပ်ရတာ ညီမ အပျော်ဆုံးကိစ္စပဲ
အောင်မြင်သွားရင် ပြောစရာတောင် မရှိလှဘူး
ဒါနဲ့ ကိုညီက ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်လား